आज चन्द्रग्रहण लाग्दै, बार्नु पर्छकी पर्दैन ? यस्तो भन्छ पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति Canada Nepal
आजबाट घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य खोपकार्ड
आज चन्द्रग्रहण लाग्दै, बार्नु पर्छकी पर्दैन ? यस्तो भन्छ पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति
क्यानाडा नेपाल मंसिर ३ २०७८
काठमाडौं - कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज लाग्ने चन्द्रग्रहण नेपाली आकाशबाट नदेखिने हुनाले ग्रहण बार्नु नपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
आंशिकरूपमा लाग्ने र नेपाली आकाशबाट नदेखिने भएकाले समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा यसबारे उल्लेख नभएको सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । नेपाली समयानुसार दिउँसो १ः०३ बजेदेखि लाग्ने चन्द्रग्रहण अपराह्न ४ः३२ बजेसम्म देखिने जनाइएको छ ।
एसियाका केही क्षेत्र, अमेरिका, उत्तरी युरोप, अष्ट्रेलिया तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलगायतबाट यो चन्द्रग्रहण देख्न सकिने नेपाल एष्टोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । नेपालबाट विरलै छायाँजस्तो भागमात्र देखिने र नाङ्गो आँखाले त्यो पनि देख्न नसकिने उनले बताए । यसपटकको चन्द्रग्रहण पहिले देखिनेभन्दा हल्का रेखा आकारमा देखिने खगोलविद्को दाबी छ ।
मंसिर ३, २०७८ शुक्रवार १२:०१:३० बजे : प्रकाशित
ग्रह शान्तिदेखि अनेकौं रोग निको पार्नसम्म उपयोगी यी मसला
नेपालमा कयौं प्रकारका मसलाहरू उत्पादनसँगै दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात तथा निर्यात गर्ने गरिएको छ । मसलाको प्रयोग तरकारीमा आवश्यकताअनुसार स्वादिष्ट बनाउन तथा अन्य थुप्रै खाद्य पदार्थ बनाउनका लागि उपयोग गर्ने परम्परा शदीयौंदेखि चलिआएको छ ।
यस्ताखाले मसलाको प्रयोगबाट मानव शरीर सन्तुलन राख्नुका साथै ग्रह तथा नक्षत्रहरूको नकारात्मक प्रभाबबाट जोगाउन पनि ऋषि महर्षीहरूले पुर्खाहरूलाई जानकारी गराएको थुप्रै प्रमाणहरू पाइन्छन् । मौखिक रुपमा जानकारी गराएर एक पुस्तादेखि अर्काे पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेकै भरमा आजसम्म पनि जीवन्त चलिआएको छ ।
यदि थोरै मात्र सावधानी अपनाउन सकेमा रोग तथा ग्रहहरूको नकारात्मक प्रभाव पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुने विश्वास गरिन्छ । नवग्रह हरूको प्रभाव कम गर्न भिन्नाभिन्नै घरेलु वस्तुहरूको प्रयोग तथा दान गर्न सकिने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्य ग्रह : रातो खुर्सानी सूर्यको नकारात्मक शक्तिलाई कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो दैनिक रुपमा भान्सामा प्रयोग गरिने वस्तु हो । यसले बुद्धिलाई तृष्ण बनाउनुका साथै रक्त सञ्चालनमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । यसका अलावा मसुरो, गुण, करवीरको फूल लगायतका वस्तु दान गरेमा सूर्यबाट हुने रोग तथा ग्रहको नकारात्मक शक्ति कम गर्न सकिने बताइएको छ ।
चन्द्र ग्रह : अलैँची तथा सुकुमेल चन्द्रमाको प्रमुख मसलाका रुपमा लिने गरिएको छ । यसलाई हरेक तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । खाना खाइसकेपछिको मसलाको रुपमा प्रयोग गर्ने परम्परा पनि रहिआएको छ । श्वाससम्बन्धी रोग तथा वायु प्रकोपलाई हटाउनका लागि पनि अति लाभदायक मानिएको छ । सेतो कपडासहित अलाइँची तथा सुक्मेल दान गरेमा पनि चन्द्रमाको प्रभाव कम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
मंगल ग्रह : मंगल ग्रहले शरीरमा रक्त सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । उक्त ग्रहको तत्व पनि रातो नै रहेको छ । यदि मंगल कमजोर तथा पापान्तर भएर बसेको अवस्था यसको फल अत्यन्तै अशुभ हुने गरेको छ । प्रेसर तथा हट्हट्याक हुनुमा मंगलको मूख्य भूमिका रहने गरेको छ । यस्तो समस्या कम गर्न सुकेको रातो खुर्सानी बहुउपयोगी रहने गरेको छ । यसका अलावा दालचिनी, अदुवा, मेथी कस्तुरी लगायतका वस्तु प्रयोग तथा दान गरेमा मंगल ग्रहको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सकिन्छ साथै विज्ञको सल्लाहअनुसार मुगाको धारण गरेमा पनि शुभ फल मिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बुध ग्रह : बुध ग्रहको कलर हरियो भएकाले धनियाँको प्रयोगबाट पित्त सन्तुलित हुने उल्लेख गरिएको छ । यसको प्रयोगबाट किड्नीलाई सफा गर्नुका साथै पिसाबसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या निको पार्ने बताइएको छ । यसका अलावा हिंग तथा हरियो धनियाँको प्रयोग तथा दानबाट पनि बुधको प्रभाव कमगर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । पन्ना धारण गरेमा पनि फाइदा हुने बताइएको छ ।’
बृहस्पति ग्रह : सम्पूर्ण ग्रहहरूको राजा देवगुरु बृहस्पति हुन र उक्त ग्रहको स्वभाव पहेंको हुने भएकाले पनि भान्सामा प्रयोग हुने बेसार बहुउपयोगी औषधिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी काटेको घाउ पुर्नका लाग एन्टिबायोटिकका रुपमा रहेको बताइएको छ । यसको प्रयोगले हाम्रो शरीरमा भएका हड्डीहरू मजबुत गर्ने यसको विशेष भूमिका रहने उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा पुष्पराजका प्रयोग गरेमा पनि दीर्घ रोगीहरूलाई लाभ मिल्ने बताइएको छ ।
शुक्र ग्रह : समस्त आयुर्वेदका ज्ञाता गुरु शुक्राचार्यलाई आयुर्वेदिकका पिताका रुपमा वर्णन गरिएको छ । शुक्रको लागि जिरा सेवनले अम्लिय प्रभावलाई कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पाचन प्रणालीमा केही असहज महसुस भएको अवस्थामा जिरा र पानी सेवन गर्ने परम्परा रहिआएको छ । यसको अतिरिक्त सोफ, सुपाडी दालचिनीलगायतका वस्तुको सेवन तथा दानबाट शुक्र ग्रहलाई बलियो बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
शनि ग्रह : शनि ग्रहको प्रभाव कम गर्न कालो मरिच बहुउपयोगी भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले कफको समस्यालाई तुरुन्तै सहजीकरण गर्नुका साथै दाँतको समस्या पनि समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा तोरीको तेल, कालो तिल, सख्खरलगायतका वस्तुको प्रयोग तथा दानबाट शनिको प्रभाव कम गर्न सकिने बताइएको छ ।
राहु ग्रह : राहुको प्रभाव कम गर्न दालचिनीबाट बनाइएको मसला बहुउपयोगी रहने बताइएको छ । यसका अतिरिक्त जाइफल पनि प्रभावकारी मानिएका छ ।
केतु ग्रह : केतु ग्रहको प्रभाव कम गर्नका लागि कालो नुन अर्थात वीरे नुन प्रयोग गरेमा यसले पेटमा हुने हरेक समस्याको बहुउपयोगी साबित हुने बताइएको छ । यसका अलावा गहतको प्रयोग तथा दान गरेमा पनि केतु ग्रहको प्रभाव कमगर्न सकिने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी हजारौं वर्षअघि यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने गरिएकाले स्वस्थमा देखापरेका हरेक प्रकारका रोग तथा समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने भएकाले पनि आजसम्म पनि हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुँदै आएको छ ।(लेखक सुरेशचन्द्र रिजाल दक्षिण एसीयाली ज्योतिष महासंघ नेपालका महासचिव तथा वास्तुविद् हुन् ।)
माघ ४, २०७८ मंगलवार १९:२९:२७ बजे : प्रकाशित
मनकामना मन्दिरमा भक्तजनको प्रबेशमा रोक
काठमाडौं - गोरखाको मनकामना मन्दिरमा भक्तजनको प्रबेशमा रोक लगाइएको छ । पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकोले मनकामना मन्दिरमा यस्तो नियम लागू गर्न लागिएको हो ।
अब आउँदो बिहीबारदेखि माघको अन्तिमसम्म भक्तजनलाई मन्दिर प्रबेशमा रोक लगाइएको हो । मन्दिरमा नित्य पूजा भने गर्न पाइनेछ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको आदेश पालना गर्न लागिएको मनकामना क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । मनकामना केबलकार बन्द गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको जनाइएको छ ।
माघ ४, २०७८ मंगलवार २०:५७:२४ बजे : प्रकाशित
# मनकामना मन्दिर
भगवान मुक्तिनाथले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् माघ ५ गते बुधबारको राशिफल
मेष राशि - पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा अधिक समय ब्यतित हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ ।
बृष राशि - यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ । काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । अरुले गरेको गलत कामको आरोप तपाईले भोग्नु पर्ला । मित्रजन हरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ ।
मीथुन राशि - आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । तपाईको बोलिको कारण आफन्तजन हरु रुष्ट रहन सक्छन । नजिकका ब्यक्ति बाट धोका हुन सक्नेछ ।
कर्कट राशि - भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ ।सफल कार्यसम्पादनको लागी कडा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ ।
सिंह राशि - बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रु सबल रहनेछन । नयाँ लगानीको क्षेत्रमा बिशेष होस पुर्याउनु होला । सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ । तपाई सगँ प्रतिस्पर्दा गर्ने ब्यक्तिहरुको बृद्यि हुनेछ । निर्णय लिने क्षमतामा ह्राँस आउनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ ।
कन्या राशि - आफु निर्णय गर्न नसक्ने अनि अरुको भर पर्ने बानिले सामान्य झन्भट आईपर्ला । स्वास्थमा गडबढि रहनसक्छ । यात्राका कारण सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ ।
तुला राशि - सामाजिक कार्यमा आफुअग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरुलाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनसक्नेछ । तपाईको कार्य क्षेत्रमा सामान्य त्रुटिका कारण मानसम्मानमा ठेस पुग्नेछ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा ज्यादा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ ।
बृश्चिक राशि - सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । मित्र तथा दाजु भाई हरुको साथ सहयोगले कार्यक्षेत्र सबल रहला तथा भाग्योदयको योग रहेकोछ । निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिषेस लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक पश्रिम खर्चीनुपर्नेछ ।
धनु राशि - सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानसिक समस्या आई पर्ने छन । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । मित्रजनको साथसहयोमा बृद्धि हुनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । कार्य सम्पादनमा अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ ।
मकर राशि - दाम्पत्य शुखमा बाधा पर्न सक्छ । मातृ पक्षमा कसैको स्वास्थमा सामान्य असर रहला । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । आटशाहसको बृद्यिहुने योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा भने सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । नयाँ कार्यको थालनि गर्नका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
कुम्भ राशि - सामाय आर्थिक अभाबको सामना गर्नुपर्ला । अनावश्यक यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । नेत्र सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सौदर्यका क्षेत्रमा खर्चहुने योग रहेको छ । पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिन राशि - यात्रा आम्दानि मुलक रहन सक्छ । कुलकुटुम्बको साथ सहयोगले नयाँ कार्यको थालनिहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चाको बिषय भईन सकिनेछ । गरीरहेको कार्य क्षेत्रबाटँ आक्समिक धनलाभ हुने योग रहेको छ । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय उत्तम रहनेछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
माघ ५, २०७८ बुधवार ०७:२३:१० बजे : प्रकाशित
पशुपतिसहितका मठमन्दिरमा आजदेखि नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द
काठमाडौं - पशुपतिनाथ, गुह्वेश्वरी लगायत पशुपति क्षेत्रका मठमन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द गरिएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकोले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आजदेखि धार्मिक कार्यक्रम गर्न बन्द गरिएको हो ।
नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै आजदेखि माघ मसान्तसम्म मन्दिर, मस्जिद गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना बाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न बन्द गरेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि एक सूचना जारी गरी यसबारे जानकारी गराएको छ ।
माघ ५, २०७८ बुधवार ०७:४३:४३ बजे : प्रकाशित
हलेसी महादेवले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् माघ ६ गते बिहीबारको राशिफल
मेष राशि - सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती अधिक श्रम ब्यतित गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । बौधिक ब्यत्तित्व हरुको साथ सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र सवल बन्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
बृष राशि - मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन । भौतिक श्रोतसाधनका प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । कार्यक्षेत्रको त्रुटिका कारण आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
मिथुन राशि - सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । मध्यान पश्चात नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । अधिक आत्मबिश्वास तथा घमडका कारण मित्रतथा दाजुभाई सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
कर्कट राशि - नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । खानपानको गडबढिका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
सिंह राशि - बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मध्यान पश्चात मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेकोछ । दाम्पत्य शुखमा कमि आउनेछ । अधुराकार्य सम्पादनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ ।
कन्या राशि - मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
तुला राशि - सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । मध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन ।
बृश्चिक राशि - गैर ब्यक्तिको संगतले अपजसको सामना गर्नु पर्ला । यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । सवारि साधनको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
धनु राशि - ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।
मकर राशि - मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
कुम्भ राशि - नजिकका ब्यक्ति बाट धोका मिल्न सक्छ सजग रहनु होला । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन । मध्यान पश्चात जिवनसाथीको सहयोगद्वारा अप्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
मीन राशि - अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
माघ ६, २०७८ बिहिवार ०७:२७:५१ बजे : प्रकाशित
बिक्रमबाबाले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् माघ ७ गते शुक्रबारको राशिफल
मेष राशि - आम्दानि क्षेत्र मध्यमनै रहेता पनि इष्टमित्रका निम्ती सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । शारिरीक आलस्यताको सामना भने गर्नु पर्ला । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ ।
बृष राशि - आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ ।
मिथुन राशि - नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ ।सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ ।
कर्कट राशि - सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ ।
सिंह राशि - निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ ।
कन्या राशि - एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ । नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानि नगरेकै बेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । जिबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
तुला राशि - पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ ।
बृश्चिक राशि - नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ । अप्रिय खवरको श्रवणले मनमा सामान्य चिन्ता प्राप्त रहने दिन रहेकोछ ।
धनु राशि - साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । मानसम्मानमा आधात पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
मकर राशि - मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
कुम्भ राशि - प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । आम्दानि मध्यम रहला ।
मीन राशि - बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
माघ ७, २०७८ शुक्रवार ०६:५९:४८ बजे : प्रकाशित